ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ကပ်ဘေးကာလအတွင်း အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက် မလိုက်နာသူတွေကို ဒေသ အသီးသီးတို့မှာ အရေးယူအပြစ်ပေးမှုတွေ လုပ်ဆောင်နေပေမယ့် ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်အချို့ကိုတော့ အရေးယူတာမျိုး မတွေ့ရသေးတဲ့အပေါ် ဝေဖန်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း လူစုလူဝေးနဲ့ ကျင်းပပြုလုပ်ရတဲ့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲနဲ့ ဘာသာရေး အခမ်းအနားတွေ မလုပ်ဖို့ ကန့်သတ်ထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၂၄ ရက်နေ့က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် တချို့ဟာ ဗိုလ်တထောင်ဘုရားပေါ်မှာ လူစုလူဝေးနဲ့ ပြုလုပ်တဲ့ ဘာသာရေးအခမ်းအနားကို တက်ရောက်ခဲ့ကြလို့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အမိန့်ကို ချိုးဖောက်ရာရောက်တယ်လို့ ဝေဖန်မှုတွေ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
အစိုးရအဖွဲ့အစည်းက တာဝန်ရှိသူတွေကို နိုင်ငံရေးအရအရေးယူဖို့ အစိုးရဘက်က ခွင့်ပြုချက်မပေးခဲ့ဘူးလို့ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးကြီးမြင့်က ပြောပါတယ်။
"ဒါက ဥပဒေအရတော့ အရေးယူရမယ့်ဟာပဲ ။ ဒါပေမဲ့ ဥပဒေမှာကိုက သက်ဆိုင်ရာက ခွင့်ပြုချက် ပေးရမယ်။ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ တရားစွဲလို့မရဘူး။ ခွင့်ပြုချက်က ဘယ်တော့မှ မပေးဘူး။ ဗစ်တိုးရီးယား အမှုတုန်းကလည်း သမ္မတက မပေးဘူးလေ။ ရဲချုပ် သုံးယောက်ကို တရားစွဲခွင့်တောင်းတာ။ သမ္မတက ခွင့်ပြုချက်မပေးလို့ တရားမစွဲရဘူး။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ရှေ့နေတွေက လွဲလို့ပေါ့။ ရှေ့နေတွေကို ဆိုရင်တော့ တရားစွဲခွင့် ပေးမယ်။ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းက လူတွေဆိုရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ ခွင့်ပြုချက်မပေးဘူး။ ဒါအစိုးရ အဆက်ဆက်ပဲ။ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကို နိုင်ငံရေးအရ အရေးယူမယ်ဆိုရင် ဘယ်တော့မှ ခွင့်ပြုချက်မပေးဘူး။"
ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်စုံတစ်ရာ အရေးယူတာမျိုးတော့ မတွေ့ရဘဲ လစ်လျူရှုထားတာဟာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးသိန်းထွန်းဦးက ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။
"ဥပေဒအထက်မှာ မည်သူမျှ မရှိရဆိုတဲ့ အချက်ရှိတယ်။ ဥပဒေပဲဖြစ်ဖြစ် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ရဲ့ချွင်းချက်ပေးထားမှု မရှိသောသူ မည်သူမဆို ချိုးဖောက်တယ်ဆိုရင် ဒါဟာအရေးယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိဘူးဆိုတာက တရားမျှတရဲ့လားလို့ မေးခွန်းထုတ်စရာရှိပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ ဥပဒေနဲ့ အညီ နေထိုင်ခြင်းဟာ ဒီမိုကရေစီ အလေ့အကျင့် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်ချုပ်သူကနေ ချိုးဖောက်တဲ့ဟာကို ဒီလိုလစ်လျူရှုထားမှုက မသင့်တော်ဘူး။"
ကပ်ဘေးကာလ အရေးပေါ်အမိန့်တွေ ထုတ်ပြန်ထားချိန်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ ၇ ရက်နေ့က လူစုလူဝေးနဲ့ တရားဟောပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့လို့ဆိုပြီး ခရစ်ယာန် တရားဟောဆရာ စောဒေးဗစ်လားနဲ့ ဦးဝေထွန်းတို့ အပါအဝင် ခရစ်ယာန်သင်းအုပ်ဆရာ နှစ်ဦးတို့ကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုဒ်မ ၂၅ နဲ့ တရားရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။
အစိုးရလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ရာမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းတွေနဲ့ ညှိစွန်းသွားတဲ့အတွက် အပြစ်ပေး အရေးယူတာထက် ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင် သူ့အမှားကိုဝန်ခံပြီး တောင်းပန်သင့်တယ်လို့ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဟောင်း ဦးရဲထွဋ်က ထောက်ပြပါတယ်။
"ဦးဖြိုးမင်းသိန်း ဆောင်ရွက်ချက်က အစိုးရလုပ်ငန်းနဲ့ ဆက်စပ်ပြီးတော့ လုပ်တဲ့အခါမှာ ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းကို ချိုးဖောက်သလို ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သူ့ကိုတော့ အရေးယူဖို့ဆိုတာထက် သူ့အနေနဲ့ တာဝန်ရှိသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ စည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာဖို့ ပျက်ကွက်တဲ့ အတွက် တောင်းပန်တာမျိုးဆို လုံလောက်ပြီလို့ မြင်တယ်။"
ညွှန်ကြားချက် ချိုးဖောက်မှုတွေကို ပြည်သူတွေကြားမှာ အရေးယူတာတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် အမိန့်တွေ၊ ညွှန်ကြားချက်တွေဟာ ပြည်သူတွေအတွက်ပဲ သက်ရောက်မှုရှိပြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ အာဏာရ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ မပါဘူးလားဆိုပြီး သုံးသပ်မှုတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကို NLD ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေက အရင်က ထိရှလွယ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နှုတ်နဲ့သတိပေးထားတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ NLD ပြန် ကြားရေးအဖွဲ့က မုံရွာအောင်ရှင်က ပြောပါတယ်။
"ဦးဖြိုးမင်းသိန်း ကိစ္စဆိုလည်း သက်ရောက်လို့ပဲ ပါတီကနေခေါ်ပြီး သတိပေးတာတွေ ရှိတယ်။ တခြား အဖွဲ့ဝင်တွေ ဒီလိုဖြစ်လာရင်လည်း ခေါ်ပြီးတော့ သတိပေးတာတွေ ရှိလာနိုင်တာပဲ။ ပြောချင်တာကတော့ တရားဥပဒေရဲ့အထက်မှာတော့ ဘယ်သူမှမရှိဘူး။ သို့သော်လည်း ဖြစ်သွားတဲ့ ကိစ္စတွေက တကယ် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ လုပ်တာလား။ သို့မဟုတ် မတော်တဆဖြစ်ပြီး ဒီလိုဖြစ်သွားတာလား ဆိုတာကတော့ စီစစ်ရလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ ကိုယ့်ပါတီကပဲဖြစ်ဖြစ် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကပဲဖြစ်ဖြစ် တကယ် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ချိုးဖောက်တယ် သိသိကြီးနဲ့ လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ မညှာပါဘူး။ ထိရောက်တဲ့ အရေးယူမှုတွေ လုပ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ပြောချင်ပါတယ်။"
ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ ဖြေရှင်းချက်ပေးဖို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကလည်း ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ သမ္မတရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက မေလ ၃၀ ရက်မှာ သမ္မတအိမ်တော် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း အဲဒီ ဘာသာရေး အခမ်းအနား တက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကို လွှတ်တော်ကနေ လိုအပ်သလို အရေးယူပေးဖို့နဲ့ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကို အယုံအကြည် မရှိကြောင်း စွပ်စွဲပြစ်တင်တဲ့အဆိုကို တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်တွေ စုပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးပြီး တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌထံကို ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ပေးပို့ခဲ့ကြပါသေးတယ်။
အရပ်သားတချို့ကလည်း ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကို အရေးယူပေးဖို့ မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းတွေက ပခုက္ကူ၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ရဲစခန်းတွေမှာ သွားရောက်တိုင်ကြား အမှုဖွင့်ခဲ့ကြပါတယ်
အစိုးရက ထုတ်ပြန်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များကို မလိုက်နာဘဲ လူစုလူဝေးဖြင့် ဘာသာရေးအခမ်းအနားလုပ်ခဲ့သည့် ကျိုက်မရောမြို့ရှိ ဘုရားထီးပင့်ဆောင်သူ အားထောင်ဒဏ် ၉လ၊ မန္တလေး နေအိမ်တခုတွင် အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များ စုပေါင်းဝတ်ပြုခဲ့သူများကို ထောင်ဒဏ် ၃ လနှင့် ခရစ်ယာန်တရားဟောဆရာ စောဒေးဗစ်လားတို့ကို အမှုဖွင့် ဖမ်းဆီး အရေးယူထားသည့် ဖြစ်ရပ်များလည်း ရှိနေသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်၏ လုပ်ရပ်မှာ ကိုယ်ထုတ်ထားသည့် covit 19 အမိန့်ကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မလိုက်နာဘဲ ချိုးဖောက်ခြင်း သာဖြစ်သည်။
Jun 22, 2020 01:40 AM
Everyone has the right to equality. Why is the difference human right and rule of law between U Phyo Min Thein and U Saw David Lah
Jun 11, 2020 07:25 AM
people will say no man is above the laws ("rule of law" ). Yangon government should abide by the rules and laws. frequently wrong is no good. Please abide by the law themselves. Shame on them for broke the laws.